ငပလီနှင်. ၁၄၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငပလီနှင်. ၁၄၄
Posted by Kaung Say Chin on Oct 1, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
ဒီနေ. ငပလီ မှာ 2012 – 2013 ဟိုတယ်ရာသီ စတင် ပါပြီ။ လေကြောင်း ၂ စီး နိုင်ငံခြားသားတွေပါလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ယ္ခုထိ အရေးပေါ် ကြေငြာချက်ကို ရုတ်သိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိသေ ပါ။ စစ်တွေ ဘက်က အခြေအနေ တွေဟာ လဲ မအေးသေးပါ။ သက်ဆိုင်ရာ များက ၁၄၄ ရုတ်သိမ်းပေးဘို. တင်ပြထားပေမဲ. ဘာ မှတော.မထူးခြားသေးပါ။ ရခိုင်ဒေသ ရဲံ. ခရီးသွားလုပ် ငန်းဟာ ထိခိုက်မဲ. အခြေနေတွေပါဘဲ။ ငပလီသံတွဲ အနေနဲ. တော. ၁၄၄ ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး တိုင်း ပြည် ရဲ. မျက်နှာ ပန်းလှ အောင်ဆောင်ရွက်သင်.ပါကြောင်း နှင်. ဆိုင် ရာ မှ အချိန်မှီအမြန် အရေးတယူမပြု ဘူး ဆို ရင် တော. ….သေချာ ပေါက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းထိခိုက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို.သော် လုံခြုံရေးသတိကိုတော. အားလုံးရှိ ဘို. လိုအပ်ကြောင်း နှင်. ၀ိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းရမှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြရပေသည်။
အခြေအနေတွေက ငြိမ်စပြုနေပေမယ့် ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က ရန်ပြုနေတုန်းပါပဲ။လုံခြုံရေး အားလျှော့သွားရင်
အရင်လို အခြေအနေတွေ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခု သက်ဆိုင်ရာက နေရပ်ကို ပြန်လို့ရပြီလို့ ပြောနေပါတယ်။
မကြာခင်ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုတ်သိမ်းပေးလောက်ပါတယ်။လောလောဆယ် ရခိုင်အရေးက ကမ္ဘာသိမို့ ဘယ်သူမှ
လူနည်းစု့တွေကိုမောင်းထုတ်ချင်မီးရှိချင်လို့ ရသေ့တောင်ကြေငြာချက် ထွက်ပေါ်အပြီးတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အား လူစုလူဝေးဖြင့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ရန် ကျူးလွန်မှုတစ်ရပ်ကို ယနေ့ နေ လည်၂နာရီခန့် မှ စတင်၍ စစ်တွေမြို့ ပေါ်တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက် ရဟန်းပျိုများအဖွဲ့နှင့်RNDP က ပြုလုပ်ခဲ့ရာလုံထိန်းနှင့် စစ်တပ်တို့ က အချိန်မှီ တားဆီးနိုင်သဖြင့် ယခုအချိန်ထိရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို၏ အကြမ်းဖက်ရန် အားထုတ်မှုမှ အထမမြောက် သေးကြောင်း စစ်တွေ ဒေသခံများ ပြောကြားပါသည်။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓသာသာဝင်များသည် စစ်တွေရှိ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို အလုံးအရင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သတ်ဖြတ် ရန်အတွက် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးတစ်ဦးကို ဘင်္ဂလီ များက ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ကြောင်း မဟုတ်မမှန် သတင်းလွင့်၍ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ခဲ့သည်။
ယနေ့ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးငယ် တစ်ဦး အောင်မင်္ဂင်္လာ ရပ်ကွက်တွင်ရေခဲချောင်း လာရောက် ရောင်းချခြင်းကို အားမန် ကုန်ပို့လုပ်ငန်းမှ ရခိုင်သား၊ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအောင်သန်းက မွတ်စလင်မ်တို့အား ရေခဲချောင်းရောင်းမှုဖြင် ကလေးငယ်အားကြိမ်း မောင်းရိုက်နက်ခဲ့ပြီး လူထုကြားတွင်မှု မွတ်စလင်မ်တို့က ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ကြောင်း မမှန်သတင်းလွင့် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။့
အဲဒီနေရာကို ပြည်နယ်အစိုးရ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းနဲ့ ရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်တပ်တစ်တပ် ရောက်ရှိလာပြီး တားဆီးခဲ့ကြပါတယ် တဲ့၊
ပြဿနာဖြစ်ရင်ဘယ်သူမဆိုအရေးယူ ။ဒါဆိုပြီးတာပါဘဲ (၁၄၄)ထုတ်စရာမလို့ပါဘူး
ဒီလဆန်း ရုတ်သိမ်းပေးမယ် သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ စစ်တွေ မှာ ထပ်ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေအရ နောက်ဆုတ်သွားပုံ ရပါတယ် … ဆိုတော့ .. ထိခိုက်လဲ
ခံကြရ တော့မှာပေါ့ကွယ် .. :chee:
Net Ywar says:
၁၄၄ ဘဲ ကောင်း ပါ တယ် အေးချမ်း တဲ့ နိ မိတ် ဆောင် ပါ တယ် ၊
နို့မို့ဆို ထကြွ သောင်းကျန်း ဆူပူ နဲ့ နားညီးလွန်းတယ် ၊
ဟိုလေ..ညနေဘက် အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ ဧည့်သည်တွေက dinner ကို ဟိုတယ်မှာပဲ စားတော့ ဟိုတယ်တွေ ပိုက်ပိုက်ပိုရလားဟင်…
တမီးက မတိလို့ မေးကြည့်ဒါနော်…
လာသူ နဲသွားမှတော့ စားသူလည်း ဘယ်ရှိပါတော့မလဲ လုံမလေးရယ်..
ပညာမတတ်သူမှန်လျှင် ဘုန်းကြီးဝတ် ကျောင်းတက်စားနေကြသည်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း အမေရိကားတွင် ပြောပြပြီးဖြစ်သည်။ပြသနာ ထပ်ရှာ
က ရခိုင် ကုလား မည်သူမဆို ပစ်သတ်ရန် သေချာလှသည်။ပိုသေချာသည်
မှာ အသောက်သမားများဖြစ်သူများနှင့် လက်ကျောမတင်းသော ငပျင်းတို့ 
သာဖြစ်သည်။2007တွင် စက်တာဘာလက ပစ်သတ်ကဲ့သို့ ထပ်လုပ်လိမ့်မည်။
Whatafoolish comment was this. That’s why we tell Kalar = lair
mab kzb says:
ပြသနာတစ်ခုဖြစ်လာလျှင် အရင်ဆုံး ၊ ဘင်္ဂ်လီကုလားဟူသောစွပ်စွဲချက်ကိုအရင်ဆုံးပြောလာသည်။
လက်ခုတ်ဆိုတာတစ်ဖက်တီးလျှင် အသံမမြည်ကြောင်းသိပါလိမ့်မည်။အစ်စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် အစိုးရအဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ခံရသောလူတန်းစားများဖြစ်သဖြင့် မည်သည့်အခါမှပြသနာကိုအစရှာသူများမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်ဖြစ်သောပြသနာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်လျှင် အစိုးရချင်းကိုင်တွယ်ပုံကွာခြားချက်ကိုသိမြင်ကြားလောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ချက်ခြင်းအရးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီ
ကျူးလွန်သူုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတောင်ကုတ်လူသတ်မှုတွင်ယခုချိန်ထိတရားခံများကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်းမကြားရသေးပါ၊ ပုဒ်မ၁၄၄ကို မည်သည့်အတွက်ယခုချိန်ထိထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မည်ထင်ကြောင်း
ဖိနှိပ်လို့သာ တော်သေး ဒါမှမဟုတ်ရင် စဉ်းစားဖို့မရဲဘူး
အခုတော့ အချိန်မှီတာလား နောက်ကျနေပီလား မသိတော့ဘူး
အဲလိုထင်နေရင် ကိုရွှေကလီးတို.ရယ် တော်ရာနေရာသာဒိုးလိုက်ပါတော့ တွယ်ကပ်ပီးလဲနေ မနေပါနဲ.တော့
မင်းတို.ကိုဖိနှိပ်ရတာလည်းငါတို.တွေလည်းမောလှပါဘီ ပျော်ရာနေရာ အမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာ၊ဖိနှိပ်မှုမရှိတဲ့
ကြိုက်တဲ့နေရာ ဘာသာတူ အမျိုးတူနေရာသာသွားနေဂျပါဒေါ့ ပြောရတာလည်းအာတောင်ပေါက်နေဘီ
—- Deleted by Admin —-
ဖြေးဖြေးချင်း.. ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း.. ဘာသာရေး..လူမျိုးရေးထိခိုက်ကုန်တဲ့ဖက်ကို ရောက်သွားပါရော..
အခုလိုပွင့်လင်းရာသီမှာ.. တိုးရစ်..ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေမလာဖြစ်ရင်.. ဒေသခံတွေ( မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းဒေသမှာနေထိုင်သူတွေ) အဓိကနစ်နာတာပါ..
ကိုယ့်ဇာတိကို ချစ်ရင်.. ကိုယ်နေထိုင်ရာဒေသ.. ကိုယ့်အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ကြစေလိုပါတယ်..။
တကယ်လက်တွေ့တော့.. ဒေသခံတွေ ဒီနှစ်ဝင်ငွေလျှော့မယ်..။ တခြားနိုင်ငံတွေပါ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးမီးစကူးပြီး လူတွေသေကြေပျက်စီးကုန်ပြီ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း.. ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အယ်လ်အေလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဒီနေ့တင်ဖြေပေးသွားပါတယ်..။